Howlgal qorsheysan oo laga fulliyay degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Howlgal qorsheysan oo laga fulliyay degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose
Wararka ka imaanaya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamo isbaheysanaya oo isugu jira Soomaali iyo kuwa Mareykan ah ay howlgal qorsheysan xalay saqdii dhexe ka fulliyeen deegaanada ku yaalla degmadaas.
Ciidamadaasi oo watay diyaarado Helicopters ah ayaa la sheegayaa in duuleedka degmada Jamaame ay uga degteen, kadibne ay damceen inay degmadaasi lug ku galaan, balse koontaroolka degmadaasi uu dagaal ku dhexmaray iyaga iyo dagaalyahanada Al-shabaab.
Dadka deegaanka oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo sheegay in dagaalkaasi uu socday muddo kooban, waxaana la soo warinayaa inuu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay soo kala gaaray.
Illaa iyo haatan ma jiro hadal kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom, kaas oo ay kaga hadlayaan weerarkaan qorsheysan ee xalay ay ku qaadeen degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose.
Dhinaca kale, Al-shabaab ayaa sheegtay inay iska difaaceen weerarkaasi qorsheysan, islamarkaana ay qasaare baaxad leh gaarsiiyeen ciidamadii isbaheysanayay ee weerarkaasi soo qaaday.